Yindawo elungele intsapho, iflethi okanye indlu ekwicomplex entle - I-Airbnb
Yindawo elungele intsapho, iflethi okanye indlu ekwicomplex entle
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguEnikő Melinda
I-HeNa Apartment lishishini losapho elinabantwana ababini. Sithanda ukuhamba nokuhlala kwezinye izixeko. Siyayikhathalela indawo elungele intsapho, ecocekileyo, enobuhlobo, ethe cwaka nekhuselekileyo yokuphumla. Sicinga ngezi zinto, senze iflethi okanye indlu ekwicomplex apho iintsapho ezinabantwana abancinci, abantu abangatshatanga, kunye nezibini eziselula zinokuziva zisekhaya. Iimfuno zakho zamkelekile, nazo! Sizama ukuqinisekisa ukuba iindwendwe zethu ezihlala apha ziba nexesha elimnandi!
Amagumbi ayi-2 anamagumbi aliqela kumgangatho wokuqala, alungiswe entwasahlobo ka-2019 enezifudumezi ezinokutshintshwa.
Igumbi lokuhlambela elineshawa nendlu yangasese.
I-Air-conditioned, isiqithi sekhitshi esinefriji, i-microwave, umatshini wokwenza ikofu, ioveni yesanti eshushu, i-toaster, iketile, ipleyiti eshushu, i-wifi engenamida, i-intanethi, ibhalkhoni, iTV eflethi kuwo omabini amagumbi.
Ukuhlala phandle, indawo yokupheka, indawo yokupaka yabucala kwibala
elivalekileyo, kunye nezinto ezingalindelwanga ziindwendwe ezibhukisha iintsuku eziyi-3 nangaphezulu. Nceda uchaze ubudala nesini sabantwana! :)
Ukungena: 2: 00 Emva Kwemini yonke imihla.
Ixesha lokuphuma: 10: 00 kusasa yonke imihla
Njengoko besithetha, oku kusenokwahluka!
IBell House edumileyo yasekuhlaleni, indawo esembindini weSt. Stephen 's Park, ibavuyisa abafundi bayo ngengoma edumileyo nezinto zokudlala zabantwana qho emva kweyure.
Xa kuthethwa ngokutya, sicebisa ukuba uKing Pizzeria, oza kukupha ukutya okuthandayo kunye neevenkile zokutyela ezikhethekileyo zesixeko.
Banokutyelela iMyuziyam yaseStari Grad, apho banokufunda khona ngembali ye-buckwheat. Ungafumana imvakalelo yezinto zethu zakudala kwimyuziyam yakudala, kunye nomboniso weVenkile yezobugcisa kunye nezixhobo zokulima ngeentsuku ezithile.
Kubathandi bezobugcisa, iPottery House inikezela ngendawo.
Ngexesha lasebusika, kukho i-ice rink yasedolophini apho ungangena khona simahla. Ukutyibilika emkhenkceni kuyafumaneka ukuze kuqeshwe. Ukuqesha ibhayisekile, ukuhamba ngebhayisekile, ukudayiva.
Umbuki zindwendwe ngu- Enikő Melinda
Két gyermekes anyuka vagyok. Óvodapedagógusként különösen nagy figyelmet fordítok arra, hogy a hozzánk érkező családokat biztonságos, otthonos környezetbe fogadjuk!
Ndifumaneka kwiindwendwe zethu yonke imihla.